Fika efatra ahaizana teny gasy (Tapany voalohany) – Blaogin'i Voniary
Fanontaniana matetika misy mametraka amiko ny hoe “ahoana kay ny fomba ahaizana teny gasy ? » Dia valiako hoe “filonana ao anaty teny malagasy sy ny fampiharana”, tsy misy hafa tsy izay ihany.
Indramiko ny tenin’ilay namanana mpandika teny iray anazavana tsotsotra azy: “ny voambolana iray dia tsy maintsy miditra ao aminao vao hainao ny mamoaka azy”.
Izany hoe tsy maintsy novakinao na nohenoinao tany ho any aloha ny voambolana iray dia noraisin’ny atidohanao izay vao vitan’ny vavanao ny miteny azy na ny tananao manoratra azy. Tsy ny teny malagasy irery ihany no voakasik’izany, fa ny teny rehetra izay tiana ianarana.
Ho fanomezana fahafaham-po anao izay te hahay teny malagasy ary, indro atolotra anao ny fomba ahaizana izany.
Esory avy hatrany ao an-doha ny fahalainana. Mila mamaky lahatsoratra amin’ny teny malagasy ianao mba ahitanao ny TSIPELINA sy ny FITSIPI-PANORATANA. Maro karazany ny sehatra ahazoanao mamaky teny malagasy ary misy ho an’ny olona isan-tsokajiny.
Eo ny boky tantara foronina , sombintantara na amboran-tononkalo maro nosoratana mpanoratra Malagasy. Natao ho an’ny karazana firehana maro izy ireny satria maro samihafa ny tara-kevitra voizina: fitiavan’olon-droa, fitiavan-tanindrazana, fanairana hambom-po, fomban-drazana, politika, sy ny sisa.
Maro sesehena ny karazana boky malagasy
Raha olona tia karokaroka indray ianao dia misy ireo boky fanadihadiana sy famakafakan-kevitra toy ny: Ny Fanagasiana nosoratan’i EDA, Ny Fokonolona nosoratan-dRatsimandrava sy ny maro hafa. Ampy anamparanao ny hetahetam-pahalalanao.
Ho an’ireo olona liam-baovao kosa dia eo ireo gazety amin’ny teny malagasy mivoaka isan’andro: Ao raha, Gazetiko, Ino vaovao… Ireo gazety amin’ny teny frantsay ihany koa dia efa ahitana ampahany teny malagasy ao anatiny araka ny lalana.
Tsy latsa-danja amin’izany koa ireo revio literera toy ny Takelaka Tsara Soratra sy ny gazety ambioka avoakan’ny Faribolana Sandratra isam-bolana. Ireny no tena sompitra sy rakitra mitahiry ny hanitry ny kanto sy ny haisoratra malagasy.
Ireo Takelaka Tsara Soratra efa nivoaka
Raha anisan’ireo tsy liana amin’ny taratasy indray ianao fa zanaky ny teknolojia dia aza matahotra fa azonao atao ihany koa ny mamaky lahatsoratra malagasy amin’ny efijery. Maromaro ireo blaogy sy tranonkala amin’ny tenindrazantsika: serasera.org, poêtawebs, gasy mblaogy sy ny maro hafa.
Mba ahafantaranao ny FOMBA FANONONA sy ny FILANTOn’ny teny malagasy indray dia ilainao ny mihaino. Ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eto an-toerana dia miteny malagasy daholo ny ankamaroany. Tsy vitsy ireo fandaharana mahaliana momba ny toekarena, ny politika, ny fizahan-tany, ny fiarahamonina ary singanina manokana ireo fandaharana manandratra ny maha-malagasy.
Raha te hianoka ao anatin’ny literatiora malagasy kosa ianao dia ao ireo fotoana manokana andefasana ny tantara indray miseho, ny tantara mitohy, ny sombintantara vakiana ary ny tononkalo any amin’ny onjam-peo.
Misy lanjany kokoa ny teny rehefa ampiainina sy lalaovina. Sehatra iray hilonana ao anatin’ny hakanton’ny teny malagasy indrindra ny seho tahaka ny antsan-tononkalo tanterahan’ny Faribolana Sandratra na koa ny tantara an-dampihazo isan-karazany.
Antsan-tononkalon’ny Faribolana Sandratra
Tsy azo tsinontsiniavina ny toeran’ny hira raha miresaka fihainoana ny teny malagasy ihany isika. Ny hira no mameno ny sofintsika matetika ary kalokaloin’ny vavantsika. Maro sesehena anefa ny vazo vokarin’ny mpanakantontsika ka anjaranao no misivana izay lanin’ny vavoninao. Ho ahy, singaniko manokana kosa ireto mpihira ireto izay mandranty voambolana mampanokatra rakibolana sy mandahatra teny amin’ny fomba kanto: Eric Manana, Levelo ary Ricky.
fika ahaizana teny malagasy, fomba ahaizana teny gasy, mianatra teny malagasy, teny gasy, teny malagasy, voambolana malagasy